Tekinoroji Yepamusoro-Indasitiri Nhau-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Kutsiva tambo - maitiro ekushanda
Kana iyo spark ichipenya iyo yepamusoro-tension voltage (inosvika 25 kV) inogadzirwa neyeye kuvesa coil
unofanira kutanga "kuyerera" kuburikidza nekambani yekuisa moto kune plug plug. Kuti uve nechokwadi chekuti izvi zvinoshanda,
tambo idzi dzinofanirwa kusangana nezvinodiwa zvinoverengeka.
Yakakwira-giredhi insulating zvivakwa, yakanyanya tembiricha kuramba (kusvika 200 ° C),
kuramba kurwisa vibration, tembiricha uye mwando misiyano ndicho chinhu chakanyanya kukosha chinodiwa
tambo dzepamusoro-giredhi dzekutsva dzinofanira kuratidza.
Uye izvi zvinowirirana, zvakavimbika, uye kwenguva refu, zvichishanda mumamiriro akashata kwazvo.
Kuramba - kwete kupokana
Nemhando dzese nhatu dzeTakumi, tambo yemwenje ine tambo yemhangura uye yekudzvanyirira plug (Fig. 1), kuvesa tambo ine kushingaira kuramba (Fig. 2), uye kuvesa tambo ine reactance (Fig. 3), mumwe anozoona kuti zvinodzivirira zviri kushandiswa . Mukutaura, kushomeka-kurasikirwa kwekutapudza pamwe kushomeka kushomeka kunodiwa. Kutarisa mugetsi yemagetsi kunoratidza kuti uku hakusi kupokana. Sekuziva kwedu, ese anoshandiswa nemagetsi mayunitsi anogadzira akawanda kana mashoma simba emagetsi magineti minda ayo mune akawanda mamiriro haakonzere chero matambudziko, asi asingadiwe mune mamwe mamiriro (kupindirana neredhiyo yekugamuchira) kana kuti zvimwe kukonzera njodzi, nekugadzira yemagetsi smog. Iyo yekutsvaira sisitimu, nekudaro, inoda kuwanda kwepfupi-kure kure kupindira kudzvanyirira kuitira kuve nechokwadi chisina kunetsa mashandiro eredhiyo, kutaurirana zvemagetsi, uye injini uye giya yuniti unit control masystem. Yakareruka, izvi zvinogona kutsanangurwa seinotevera: Chaizvoizvo, iyo yekuvesa sisitimu ine coil uye capacitor, inonzi zvakare resonating dunhu mune emagetsi mainjiniya. Aya magesi oscillations anoderedzwa nekudzvinyirira resistors (kazhinji 1-5 kOhm) inosanganisirwa mukati memoto wedunhu. Izvi zvinovimbisa kushanda-kusinganetsi kushanda kwezvishandiso zvakasiyana, izvo zvinowanzonzi electro-magnetic kuenderana (EMC). Hunhu hwekudzivirira tambo ne reactance (Fig. 3) zvakasiyana, mukusvika pakuramba kunoenderana nekuwandisa frequency (injini kumhanya). Mune ino kesi kukwikwidza kwakakwirira kunoitika neakakwira kumhanya nekuda kweiyo waya coil (inductive reactance).
Hunhu pasina kurasikirwa kwesimba
Iko kufungidzira kwekuti vanopikisa vanoderedza simba rekubatidza uye, nekudaro, kuita kweinjini kunowanikwa kusiri iko nekuti iwo ma resistor anoshandiswa akaomesesa zvekuti anogona kuregeredzwa. Asi ichokwadi kuti tambo tambo dzakapihwa naTakumi mune yepakutanga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinopa zvakanakisa kupindira kudzvinyirira pamwe ne optimum kuvesa mashandiro. Zvakachengeteka, zvakaenzana, uye nehupfumi, pamusoro penguva refu yenguva.
Prev Peji: Takumi kuvesa coil fekitori